एउटै औषधिको मूल्य २५ करोड ! के हो यति महँगो औषधि, कुन रोगको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ ? « Salleri Khabar
१० साउन, काठमाडाैँ । एउटै औषधि कतिसम्म महँगो होला ? सुन्दा अपत्यारिलो लागे पनि बास्तविकता हो– जोल्जेन्स्मा नामको औषधिलाई २१ लाख २५ हजार अमेरिकी डलर (२५ करोड २८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी) पर्छ। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (एसएमए) रोगका लागि यो दिइन्छ।